USilbano Garcia, II. Ukhonza njengomvangeli kumabandla kaKristu, kwaye nguye umsekeli we-Internet Ministries. Ngomhla we-Meyi 1, i-1995 waba negalelo ekuhambiseni isango lokuqala le-Intanethi kwiicawa zikaKristu emhlabeni wonke owaziwayo ICawa--Christ.org. INkosi iye yamsebenzisa ekumiseni amabandla amahlanu, kwaye ubhaptize imiphefumlo ye-1,526 ibe ngumzimba kaYesu Kristu. NguThixo kuphela owaziyo inani lemiphefumlo efikile kuKristu ngokusebenzisa izifundo zethu ze-intanethi kunye nokufikelela kwi-Internet Ministries. UMzalwan 'uGarcia uye waziwa ngokuba ngumvangeli we-intanethi kunye noovulindlela kwintsimi ye-Intangelism. Uye waba negalelo ekuncediseni amakhulu amabandla ekusebenziseni i-Intanethi njengesithuthi sokusasazeka kweVangeli likaYesu Kristu.